Fijerena ny sosialim-bahoaka : Tsy noresahin’ny filankevitry ny minisitra ny vidim-piainana | NewsMada
Fijerena ny sosialim-bahoaka : Tsy noresahin’ny filankevitry ny minisitra ny vidim-piainana
Hiandry fipoahana ara-tsosialy sy korontana ? Voadingana tanteraka ary resaka hafa mihitsy, tsy misy idiran’ny fiainam-bahoaka ny nodihihina tao amin’ny filankevitry ny minisitra, tsy ara-potoana, natao teny Iavoloha ny asabotsy teo. Na indraim-bava aza, tsy voaresaka ny momba izao fiakaran’ny vidim-painana izao. Misongadina amin’izany ny filankevitry ny minisitra izany ny resabe momba ny fivoriana sy fivahiniana any ivelany. Ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony mbola mitohy hatrany hatramin’izao ho an’ny minisitera sasany nefa tsy nisy minisitra niova na noesorina intsony. Fanomezana vahana ny namana sy ny fianakaviana na mpiray fiaviana anaty minisitera?
Hanao randran-tarihina ny fiakaran’ny vidim-piainana
Tsy voajery tamin’io filankevitry ny minisitra, ohatra, ny vidin’ny vary, miakatra isan’andro ary mihoatra ny 700 ar ny kapoaka na maherin’izany any amin ‘ny faritra hafa. Eo koa ny vidin-tsolika… Hanaraka ho azy tsy ho ela ny vidin’ny arina fandrehitra sy ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro (PPN). Miditra amin’ny fotoam-pahavaratra tanteraka rahateo isika , vanim-potoan’ny maitso ahitra. Tsy mba nisy fepetra na vahaolana niainga avy amin’ny filankevitry ny minisitra avokoa izany.
Efa fantatra fa tratry ny haintany sy ny tondra-drano isika tamin’ny taom-pambolena teo ary anisan’ny anton’ny nahakely ny vokatra izany. Vahaolana hitan’ny fanjakana ny fanafaram-bary saingy tsy nitondra inona amin ‘ny vidin’ny vary eto an-toerana izany. Izao iaraha-mahita sy miaina izao. Mbola ny eto an-dRenivohitra aza izany fa ahoana ny vidim-bary any an-kodahoda sy ny tany lavitra andriana rehetra any ?
Tahaka izao ihany ny niandohan’ny pesta. Tsy noresahina tamin’ny filankevitry ny minisitra mihitsy raha tsy efa matin’izany valanaretina izany ilay teratany vahiny. Teo vao nikoropaka…
Tokony hametram-pialana ny tompon’andraikitra
Mbola nambara indray anefa avy eo fa efa voafehy ny pesta… Telo volana aty aoriana, tafakatra 202 ireo maty ny niafarany. Ahina mety ho tahaka izany koa ity vidim-bary ity. Ho tonga amin’ny korontana na fifanjevoana, halatra sy fandrobana ny raharaha ? Any amin’ny firenena any ivelany ny tahaka izany, efa nametra-pialana ny tompon’andraikitra rehefa tsy voafehy na tsy mahita vahaolana. Ka ho tahaka izany koa ny minisitera mahakasika mivantana izao sondro-bidim-piainana izao. Ny misahana ny Varotra, ny Fambolana, ny Mponina… Aiza manoloana izao fiainam-bahoaka izao ?
Fotoana itakiana vahaolana maharitra, tsy petatoko na afo mololo izao. Tokony handray ny andraikitra tandrify azy ireo tompon’andraikitra. Dieny tsy mbola tara satria efa niteny avokoa ny mpahay toekarena, ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa fa ho ratsy izy ity…